Tsy mijanona fotsiny ny asa satria milatsaka ny mari-pana, fa raha tsy misy fonon-tànana mety, maharary tokoa ny mamita ny asa amin'ny hatsiaka. Noho ny insulation, ny coating tsy tantera-drano ary ny fanitsiana betsaka kokoa amin'ny fonon-tànana amin'ny ririnina tsara indrindra, ny fitaovana mangatsiaka sy ny rantsantanana mafy dia tsy ...
Raha mipetraka amin'ny toetrandro mangatsiaka ianao, dia tsy isalasalana fa ny tsaramaso sy satroka baoty dia ampahany lehibe amin'ny akanjonao amin'ny ririnina. Fa na te-manao satroka mafana na manampy lamaody lamaody ianao, amin'ity taona ity (sy ireo taona vitsy lasa) dia toa manao satroka. Ny Caphartt Men's Acrylic Watch Cap dia ...
Hitan'ny mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Harvard fa matetika ny olona mahomby dia maneho fironana tsy hanaraka fomban-drazana. Ohatra, amin'ny tontolon'ny varotra matotra, ny olona dia mirona manao kiraro baoty mamirapiratra. Ilay fanadihadiana antsoina hoe "Red Sneaker Effect" dia manadihady ny fihetsiky ny olona manoloana ny p ...